Odawaa “Wax saameyn ah ma yeelan doonto ka bixitaanka dalka ee Nile Academy | Baydhabo Online
Odawaa “Wax saameyn ah ma yeelan doonto ka bixitaanka dalka ee Nile Academy
Wasiirka Arrimaha Gudaha C/raxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegay in aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dalka howlihii Hey’adda Nile Academy ka waday Soomaaliya, kadib markii Golaha Wasiirada u qabteen in 7-maalmood dalka uga baxaan.
Mr Odawaa ayaa sheegay in howlaha ay waday Hey’addaas ay halkeeda ka sii socon doonaan, isla markaana dowladdaha Turkiga iyo Soomaaliya ay ka wada hadleen in maamul cusub loogu sameyn lahaa hey’addaas.
“Go’aanka Golaha Wasiirada wuxuu ahaa in 7 maalmood ay dalka uga baxaan Hey’adda Nile, dabcan cida bedeleysaa waa laga tashtay, qorshaheedana horay ayuu u jiray, dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya arrintaas meel baa wax uga yaaliin”ayuu yiri Wasiir Odawaa oo la hadlayay Idaacada VOA.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in wixii berri ka dambeeya ay heystaan shaqaalaha Hey’adda Nile inay dalka uga baxaan mudada 7-da maalmood, isla markaana madaxdooda lala kulmi doono.
Mar la weydiiyay howlaha Hey’adda Nile heysay ayuu sheegay inay isugu jireen arrimo waxbarasho iyo caafimaad, isagoo xusay in dhamaan kaalinta ay Hey’adda heysay la buuxin doono, damaanad qaadkana ay bixiyeen dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya sida uu yiri.
“Hey’adda Nile Academy waxy gacanta ku heysaa Iskuulkii la dhihi jiray Buulo Tikniko oo ay hada u bixiyeen Beder School, Dugsigii sare ee Banaadir oo qeybna Iskuul ah iyo qeybna uu ku yaalo Isbitaalka Deva”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Golaha Wasiirada ayaa shalay isku raacay in gebi ahaanba la joojiyo Howlihii Hey’adda Nile ka waday Soomaaliya, kadib markii la sheegay in hey’addaas ay hoos-tago hey’ado uu leeyahay ninka la tuhunsan yahay inuu ka dambeeyay isku daygii afgambi ee ka dhacay dalka Turkiga.